Date My Pet » Inona no hanaovana amin'ny A Voalohany Date By Zodiaka Sign
Last nohavaozina: Jan. 19 2021 | 3 min namaky
Rehefa mandeha amin'ny daty voalohany, zavatra voalohany mety hieritreritra raha vao antoka izany ianao dia, "Inona no handeha hanao?!"Na farafaharatsiny, fa iray amin'ireo zavatra voalohany ny hevitrao ny. Te-hahazo aina eo izay mitafy, fa ianareo koa mba hahazoana antoka fa te tsy hanafintohina ny olona mivoaka ianao miaraka amin'ny, ary mba hahita anareo manintona. Mahita ny Zodiaka sonia eto ambany, ary hahazo izay hevitra ho afaka manao izay mety hisakana ny masony anao amin'ny fotoana rehetra.
Ny daty no Aries fieriest ny afo famantarana, izay mahatonga azy ireo manaiky ilay loko mena. Ny kokoa sy milokoloko mamirapiratra ny mena, ny tsara kokoa. Te-hahita ny vatanao koa, ka manao akanjo tsara indrindra accentuates faritra ny kibonao. Raha manana vatana lehibe, mandeha ho an'ny tightest akanjo anananao. Tian'izy ireo faran'izay mafana ianao.
Your Taurus date is a practical earth sign, ka karakarainy ny fitafiana nentim-paharazana kokoa. Faritra iray haka ny hoditra mba hampisehoana, ka tandremo ny sisa voasarona. Tokony ho voajanahary Makeup tarehy, ary tokony ho firavaka tsara tarehy feno vato. Izany famantarana mamaly tsara ny loko izay fahita eo amin'ny natiora, tany loko toy ny muted anana na volontany. Arakaraka ny avy eto an-tany manerana ho andriamanitra / andriamanibavy, ny tsara kokoa.
Ny Gemini daty dia playful sy mahafinaritra, izany fitafiana amin'ny zavatra kely mahafatifaty sy falehan'ny olona. Amin'ny maha-famantarana rivotra, izay tia ny haharaka inona no ao, ary inona no tsy. They can have a childlike personality, mba hahafahan'izy ireo hamaly tsara ny zavatra izay mampahatsiahy azy ireo ho ankizy / tanora, toy ny zipo sy ny varsity plaid palitao. Andramo manao mamirapiratra, loko mahafinaritra manaitaitra ny saina.
Cancer ny daty no famantarana ny fampiononana, ka tsy manana ny akanjo na inona na inona koa ny mamatotra, wear heels too high, na anaovy kravaty ianao, raha izany foana fidgeting. Raha toa ka mahazo aina tanteraka ianao ny zavatra ianao manao, Ho tonga izay niampita ho azy ireo. Try to avoid bright colors or anything that’s really wild and out there that could scare them away.
Leo ny daty te-hahatsapa zavatra tahaka izy ireo daty ny mafana indrindra ao amin'ny efitrano, ny olona rehetra manana ny maso, ka glam izany. They want you to look as glamorous as you can. Azonao atao mihitsy aza ho borderline tacky / gaudy. Sosona ny firavaka – mainka bling, ny tsara kokoa. Tiany mena satria manintona ny saina, ary volamena sy volomparasy satria ry zareo ny loko ny fianakavian'ny mpanjaka.
Ny daty Virgo tsy miraharaha betsaka momba ny akanjoko, na poketra na izany. They’re the biggest concern is that you smell good, mazava naka ny ranonorana mialoha, ary tsy manao be loatra hairspray, manjamaso, na dia toa saribakoly. Ny fahadiovana dia laharana iray ho famantarana izany. Ataovy ny akanjo tsotra, sleek, ary tsy hiala amin'ny tsy miandany loko. Sahiran-tsaina mora foana ry zareo, loko mamirapiratra izany hahatonga azy ireo ho manahy.
Ny Libra daty no tena lamaody ny rehetra ny Zodiaka famantarana, ka tsy maintsy handaka azy ny notch. Mijery ireo ny akanjoko, ary mitambatra ho mangatsiaka, damaody fijery. Izany famantarana mitondra ny zava-kanto, izay no mahatonga azy ireo izany ianao lamaody, dia manantena anao miara-mijery sy stylish. Tiany firavaka feo, Accessories, sy ny firavaka tsara tarehy, fa tsy be loatra ny.
Ny Scorpio daty no famantarana fa mitondra ny maizina, ka mandehana ho maizina loko. Raha afaka misintona eny doha-ho-paladia mainty, ataovy. Dia tahaka anao afenina ihany fa amin'ny akanjo mafy izay mampahatsiahy azy ireo amin 'ny fanandevozana (famantarana io no mifehy ny olana). Mandehana ho smoky maso, maso no mahatsiaro fa ny varavarankely ho an'ny fanahy ary te-handinika akaiky anao mafy.
Ny biby dia tsy Sagittarius matetika fa ho lamaody sy ny fitafiana, fa ianao no te ho tsara endrika eo. Loko mamirapiratra tiany sy tia akanjo na firavaka izay manana tantara ho azy. Raha nahazo izany mandritra ny diany, na dia velona tao ny fananany amin'ny alalan'ny toe-javatra hafahafa sasany, Atsipazo amin'ny ary aoka izany ho loharanom-mahaliana resaka. Ho farany dia nahita * * mahaliana anao.
Ny Capricorn daty no tena nentim-paharazana ny rehetra ny Zodiaka famantarana, ka hikambana amin'ny nentim-paharazana Outfits. Vehivavy, mamoaka ny LBD; gents, haka izany kompile dia afehezo. Alaviro mazava loko, ary tsy hiala amin'ny maizina Atsy na ny Aroa, indrindra volontsôkôlà sy ny mainty. Ahoana no ataonao Te akanjo handeha Gala ara-politika, ary hanome anao Ho hevitra tsara ny fomba tiany hijery anao.
Ny daty no Aquarius unconventional ny rehetra indrindra ny Zodiaka famantarana, ka misalasala ny milalao miaraka amin'ny fijery ary miezaka zavatra hafa. Loko manga ny volony na mavokely, amim-pireharehana tout fa na ny kibo eyebrow bokotra tevika, na mitafy ny recycled soda tavoahangy firavaka. Tsy miraharaha fironana amin'izao fotoana izao, ho avy ihany ny olona, ka tsy handeha hiaraka inona no ao amin'izao fotoana izao.
Ny Pisces daty no tantaram-pitiavana lehibe indrindra, ka raha efa nahita ny akanjo eo amin'ny fonon'ity-tiany na tantara ao amin'ny tantaram-pitiavana sarimihetsika, mety miasa. Tiany ruffles, tapa amin'ny mikoriana sy ny hetsika, dantelina, ary raha nanao izany ny tenanao, dia tsara kokoa. Tsy mampaninona mitandrina izany tsotsotra aza, ary Jeans sy ny lobaka tsara afaka ampy. Ny toerana tena loko dia pastels.